တစ်ကိုယ်တော်သုံးကိရိယာများ - သင့် ဦး နှောက်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ငါသည်သူ၏ရန်သူများကိုအောင်နိုင်သူအဘယ်သူသည်သူ့ကိုထက်မိမိအလိုဆန္ဒများကိုအောင်မြင်သောသူကို braver သူ့ကိုရေတွက်; အခက်ခဲဆုံးအောင်ပွဲများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလလူသားများမူးယစ်ဆေးဝါးများမရှိဘဲဦးနှောက်ချိန်ခွင်လျှာထိန်းသိမ်းခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူ wrestle ကြရသည်။ အာဏာအရှိဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် တခြားသူတွေနဲ့ဖော်ရွေအပြန်အလှန်။ သို့သော်အခြားအလေ့အကျင့်များကိုလည်းအသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ပြန်လည်ထူထောင် porn အသုံးပြုသူများအထောကျအကူပွုတွေ့ပြီကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများစာရင်းပြုစုအောက်တွင်။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် အောင်မြင်စွာ reboot လုပ်သောလူများ၏ထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များသည်။
တစ်ကိုယ်တော်ကိရိယာများ - တရားရှုမှတ်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်း
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရှိ” ဘာဝနာ
အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စဉျးစားဆငျခွပညာသည်များအတွက်ရငျးမွစျ Institute က
တစ်ကိုယ်တော်ကိရိယာများ - လေ့ကျင့်ခန်း
လေ့ကျင့်ခန်းကဦးနှောက်ရဲ့ dopamine system ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အားရစရာစွဲကူညီပေးသည်
Kegel လေ့ကျင့်မှု (တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်လေ့ကျင့်ခန်း)
အလေးချိန် LIFT ထံမှစိတ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
ယောဂ - ချိန်းတွေ့ခြင်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။
ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးစွဲ (2018) စစ်တိုက်ခြင်းကကူညီနိုင်
Gettingstronger.org - ဟော်မုန်းတွေအကြောင်း
သင့်ရဲ့ (receptor) သတ်မှတ်မည် point တွေပြောင်းလဲ
လေ့လာမှု: အိပ်စက်ခြင်းဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ dopamine D2 receptors ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ
အစာရှောင်ခြင်း (visit ည့်သည်၏အကြံပြုချက်)
“ Wack: အင်တာနက် Porn ကိုစွဲနေခြင်း” (ပြန်လည်သုံးသပ်)
"No More မစ္စတာ Nice Guy '
“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်မဟုတ်ဘူး” \_ t
ဖြည့်စွက်, အစားအသောက်, မူးယစ်ဆေးဝါး
လေ့လာမှု -“ လူငယ်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအစားအသောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်” (တိုးမြှင့်သီးသောအသီးစားသုံးမှု, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် flavonoids လူပျိုတို့အတွက်ပညာရေး၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ )
EMDR (မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှု Desensitization နှင့်သန့်စင်)
Neurofeedback နှင့် EEG ကုသမှု
Constance Scharff, Ph.D အားဖြင့်စွဲလမ်း Recover ကူညီပေးခြင်းသုံးဘက်စုံကုသမှု,
Porn Blockers - အင်တာနက်စစ်ထုတ်စက်များ
သင့်ရဲ့မက်လုံးပေး (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) Remove
သင့်ရဲ့စွဲလမ်း (ပြင်ပ) မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲထုတ်
101 အရာ Porn မှ Fapping ၏မယ့်အစားလုပ်ပါရန်
စုံလင်သောစာရင်းဇယား Format ကို
တစ်ကိုယ်တော်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူတစ်ဦးက Man စမ်းသပ်မှု
Cold Showers to Ode (အတ္တလန္တိတ်)
Prozac ထက် သာ. ကောင်း၏
သင့်ရဲ့ (receptor) Setpoint ပြောင်းနည်း
လေ့ကျင့်ခန်း: အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးစိတ်မကျဆေး Antidepressants?
ဉာဏရေးရာစွဲဆန့်ကျင် (2015) ကဦးနှောက်ကိုအိပ်ရေးဝြခင်းစခွေငျးငှါ
porn recover အဘို့အတှေးတောဆငျခွ
သိပ္ပံပညာရှင်များသင်သည်အဘယ်သို့စားရကြသင့်ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ - နှင့်သင့်ကလေးတွေသူတို့
porn recover များအတွက်အိပ်စက်ခြင်းအကြံပြုချက်များ
YOUTube Porn - လူငယ်ကောင်လေးဖြတ်ခြင်းအပေါ် Vlog
တစ်ကိုယ်တော်“ စွမ်းအင်” ဖြန့်ဝေသည့်အလေ့အကျင့်များ